SONY VAIO အပေါ်ယာဉ်မောင်း INSTALLING - ဆောင်းပါးများ - 2019
03.03.2013 အများစုမှာ laptop | အထွေထွေ | စံနစ်
Sony Vaio လက်ပ်တော့ပေါ်မှာရှိသမျှဒရိုင်ဘာ၏ installation - အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့မျှမျှတတသေးအဖွဲတာဝန်။ ကူညီဖို့ - Vaio များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install အဘို့အဘယ်သို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းပြောပြအများအပြားဆောင်းပါးများ, သောကံမကောင်း, အစဉ်မပြတ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
လက်ပ်တော့ဝယ်ယူသောအခါ, ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးအရာသူတို့ထဲကအတော်များများ, delete (laptop ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကိုအပါအဝင်) ပုံစံနှင့်အစားမူလစာမျက်နှာ၏ Windows7ကို Ultimate ထား - ယေဘုယျအားဖြင့်ကပြဿနာရုရှားအသုံးပြုသူများအတွက်ပုံမှန်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပေသည်။ ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏အကျိုးကျေးဇူးများအလွန်သံသယဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာနေ့စွဲ - လူကို Sony Vaio Laptop ကို Windows 8 ၏စင်ကြယ် install လုပ်ခဲ့သလဲ, ယာဉ်မောင်းကိုမတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ် (Sony ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက website တွင် Windows 8 ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နေတဲ့သီးခြားညွှန်ကြားချက်ရှိပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ install တစ်ဦးကိုမထောက်ပံ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု) ။
နောက်ထပ်ဘုံကိစ္စတွင်: က "မာစတာ" ကွန်ပျူတာများ၏ပြုပြင်ဖျော်ဖြေ, သင်၏ Sony Vaio လုပ်နေတာနှင့်တကွကြွလာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - စက်ရုံပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကိုဖျက်ပစ်သည်အသင်းတော်ကိုala Zver DVD ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းရလဒ် - အားလုံးလိုအပ်သောဒရိုင်ဘာကိုတပ်ဆင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, မသင့်တော် drayverpaki နှင့် Sony Site ကိုထူထောင်သည်မဟုတ်တရားဝင်ကနေ download လုပ်ပါမှစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကိုယာဉ်မောင်း။ ဥပမာအားဖြင့်အာဏာကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Sony ကမှတ်စုစာအုပ် - ဒါဟာတစ်ဦးတိုး brightness, volume touchpad ကိုသော့ခတ်နှင့်အခြားများစွာသောလျော့နည်းသိသာပေမယ်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ Laptop ကိုသော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ငါ Vaio များအတွက်ယာဉ်မောင်းဘယ်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်
တရားဝင် site ပေါ်တွင် Sony Vaio ယာဉ်မောင်း
Download သင့်ရဲ့ Laptop ကိုမော်ဒယ်ယာဉ်မောင်းနှင့် "ပံ့ပိုးမှု" အောက်ရှိအရာရှိတဦးက Sony က website တွင်ဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာအခြားသင့်ပါတယ်နိုငျသညျ။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုအဘယ်သူမျှမကွဲပြားဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - ဒါဟာရုရှား site ကိုဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင်ဥရောပမဆိုဖို့အတွက် log နိုငျသညျ, ဖိုင်တွေဒေါင်းလုဒ်မဆွဲပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအဘို့ site တစ်ခု၏စံနမူနာကိုပြသနေသောကြောင့်အခုအချိန်မှာ sony.ru, အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ , sony.com ကိုသွားပါအဆိုပြုချက်ထဲမှာ "ပံ့ပိုးမှု" ကို select လိုချင်သောတိုင်းပြည်ရွေးချယ်ရေးသတ်မှတ်။ စာရင်းမှာတော့ကို select လုပ်ပါ Vaio နဲ့ကွန်ပျူတာ, ထို့နောက် - ထို့နောက် Vaio, - Notebook, အောက်ကညာဘက်လက်တော့မော်ဒယ်ကိုရှာပါ။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ VPCEH3J1R / ခ ဒေါင်းလုပ် tab ကိုရွေးချယ်ပါ, အဲဒါကိုရက်နေ့တွင်, အပိုင်း Preinstalled ယာဉ်မောင်းနှင့်အသုံးအဆောင်များအတွက်သင်ဟာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအဘို့ရှိသမျှကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် utilities ကို download လုပ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့၎င်းတို့အားလုံးကိုတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုငါ့အမော်ဒယ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းသွင်းစဉ်းစားကြစို့:
Vaio လျင်မြန်စွာ Web ကို Access ကို တစ်ဘရောက်ဇာကိုပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါမှတ်စုစာအုပ်အပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Mini-operating system ကိုတစ်မျိုး, (Windows ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာမစတင်ထားဘူး) ကိုပိတ်ထားသည်။ ပြီးပြည့်စုံသည့် hard disk ကို format လုပ်ပြီးနောက်, သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ် restore နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီဆောင်းပါး၌ဤဖြစ်စဉ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မလိုအပ်ပါလျှင်သင်, ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်။
ကြိုးမဲ့ LAN Driver (Intel က) ကားမောင်းသူက Wi-Fi ကို။ ဒါဟာက Wi-Fi ကိုအလိုအလျှောက်ဆုံးဖြတ်လျှင်ပင်တပ်ဆင်ရန် သာ. ကောင်း၏။
Atheros Bluetooth® Adapter ကို ဘလူးတုသ်ကားမောင်းသူ။ Download ပု။
Intel ရဲ့ Wireless Display Driver ကို Wi-Di နည်းပညာများအတွက်ဝါယာကြိုးမပါဘဲမော်နီတာချိတ်ဆက်ဖို့ကားမောင်းသူ။ လူအနည်းငယ်သင်ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်, လိုအပ်ပါတယ်။
ညွှန်ပြစက်မောင်း (အဲလ်ပ်တောင်တန်း) အဆိုပါ touchpad ကို၏ယာဉ်မောင်း။ သငျသညျကိုအသုံးပြုနေလျှင် Check သုံးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် features တွေလိုအပ်ပါတယ်။
Sony က Notebook အသုံးအဆောင်များ Sony Vaio laptop များအတွက်စီးပွားဖြစ်ကိရိယာများ။ ပါဝါကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ပျော့ပျောင်းသောခလုတ်။ အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သေချာပါစေ။
audio ယာဉ်မောင်း အသံယာဉ်မောင်း။ အသံဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း load ။
Ethernet ဟာယာဉ်မောင်း NIC ကားမောင်းသူ။ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
SATA Driver SATA ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ။ လိုအပ်
ME ယာဉ်မောင်း Intel ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်မောင်း။ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Vaio စောင့်ရှောက်မှု Sony ကထဲကနေ utility, သင်၏ကွန်ပျူတာများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ကားမောင်းသူ update ကိုကတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူး။
chipset ယာဉ်မောင်း အဆိုပါ Download
Intel ကဂရစ်ဖစ်ယာဉ်မောင်း ကားမောင်းသူပေါင်းစည်းဂရပ်ဖစ် controller ကို Intel က HD ကို
Nvidia ကဂရစ်ဖစ်ယာဉ်မောင်း ဗီဒီယိုကယာဉ်မောင်း (discrete)
Sony က Shared စာကြည့်တိုက် Sony ကမှအခြားလိုအပ်သောစာကြည့်တိုက်
SFEP ယာဉ်မောင်းACPI SNY5001 Sony က Firmware တိုးချဲ့မှု Parser ယာဉ်မောင်း - အရှိဆုံးပြဿနာကားမောင်းသူ။ တစ်ချိန်တည်းအများဆုံးလိုအပ်သော၏တဦးတည်းမှာ - အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို Sony Vaio branded ပေးပါသည်။
Vaio စမတ်ကွန်ယက် သိပ်လိုအပ်သောကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုမရစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် utility ။
Vaio တည်နေရာ Utility ကို ဒါဟာအစအရှိဆုံးလိုအပ်သော tool ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
utilities များနှင့်ယာဉ်မောင်းသင်တို့၏လက်ပ်တော့မော်ဒယ်အစုံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ဖို့များပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရဲရင့်အတွက်သော့ချက်အချက်များသူတို့က Sony Vaio PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC များအတွက်လိုအပ်သောများမှာကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Vaio အပေါ် drivers တွေကို install လုပ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ငါသည်ငါ့ laptop ကိုအပေါ်ကို Windows 8 အတွက်ယာဉ်မောင်း၏ installation နှင့်အတူညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရပေမယ့်, ငါက Sony Vaio အပေါ် drivers တွေကို install လုပ်ဖို့မှန်ကန်သောအမိန့်ကိုရည်မှတ်အကြံဉာဏ်ကိုအများကြီးဖတ်ပြီးပါပြီ။ တစ်ဦးချင်းစီမော်ဒယ်, သင့်နှင့်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်အလွယ်တကူခေါင်းစဉ်၏ဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူဖိုရမ်များအပေါ်ဤအချက်အလက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အလုပ်မလုပ်ဘူး - ငါသာပြောနိုင်ပါသည်။ ထိုမျှမကသာ Windows 8, ဒါပေမယ့်အခါသင်လက်ပ်တော့နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်မပြန်လည်ထူထောင်ရေး partition ကိုမှလာသည့်အတွက် Windows7Home Basic, install လုပ်ပါ။ သို့သော်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာအမိန့်မှမသုံးပဲဖြေရှင်းခဲ့သည်။
ဗီဒီယိုကိုဥပမာ: ACPI SNY5001 အမည်မသိ Device Driver ၏ installation
ချက်ချင်းဗီဒီယိုပြီးနောက်လာမည့်အပိုင်းများတွင် Sony ကထဲကနေ installers unpacked ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဗီဒီယိုကို - အားလုံးယာဉ်မောင်းများအတွက်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက် (သို့သော်အဓိပ္ပာယ်ဗီဒီယိုတွင်ထင်ဟပ်နေသည်) ။
Vaio remontka.pro ကနေယာဉ်မောင်းတစ်ဦးလွယ်ကူပြီးအောင်မြင်သောတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ညွှန်ကြားချက်များ
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကို install မဟုတ်ပါ: သင်၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်နဲ့တွဲသုံးဘို့မရည်ရွယ်
Windows7ကို (တစ်စုံတစ်ရာ) နှင့်ယခု Windows7ကိုခဲ့တာကိုဝယ်ယူသည့်အခါသင့်ရဲ့ Laptop ကို အကယ်. :
အရာအားလုံးအောင်အောင်မြင်မြင် install လျှင်နောက်တစ်နေ့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်, လိုအပ်သောလျှင်, "install" folder ထဲမှာဥပမာ, ဖိုင်ကိုရွှေ့ဆိုင်း, သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ, installation ဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ။
ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုဒီကွန်ပျူတာများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကို, သို့မဟုတ်အခြားပြဿနာများ, ဆိုလိုသည်မှာ၏ installation အကယ်. ယာဉ်မောင်းထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမယ့် file ကိုချွတ်ပယ်, installed ကြသည်မဟုတ်, ဥပမာအားဖြင့်, ဖိုင်တွဲ "Install မနေပါနဲ့" ။ လာမယ့်ဖိုင်ရွှေ့ပါ။
ဝယ်ယူ Windows7ကိုကြီးနဲ့ Windows 8 ကိုယခုသတ်မှတ်ထားပါက - အရာခပ်သိမ်းသည်ယခင်အခွအေနေသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Windows7ကိုဘို့ compatibility mode မှာဖိုင်တွေအားလုံးကို run ။
အဆင့်နှစ်။ ယခုမှာအဓိကအရာ - installed ခြင်းကိုငြင်းပယ်ကြောင်း SFEP ကားမောင်းသူတည်ထောင်ရန်, Sony က Notebook အသုံးအဆောင်များနှင့်အခြားအရာအားလုံး။
Sony က Firmware တိုးချဲ့မှု Parser (SFEP): ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူစတင်။ Device Manager မှာ, ကို "အမည်မသိစက်ပစ္စည်း" ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ် ACPI SNY5001 (များစွာကိုပိုင်ရှင်များအတွက်ကောင်းပြီ-လူသိများကိန်းဂဏန်း Vaio) ။ ဖိုင် .inf စင်ကြယ်သောပုံစံအတွက်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေရေးအများစုဖွယ်ရှိရလဒ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တရားဝင် website ကနေ installer အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မည်သို့ကြောင့်နိုင်သနည်း
Utility ကိုပညာရှိအထုပ်သို့မဟုတ် Universal Extractor download လုပ်ပါ။ Program ကိုယာဉ်မောင်း installer ကိုဇီပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Laptop ကိုပံ့ပိုးပေးမထားပါဟုပြောသူများပါဝင်သည်အပေါငျးတို့သဖိုင်များ, ကို Sony ကနေမလိုအပ်တဲ့ Verified ပယ်, extract ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖို့ Task Manager ကိုအသုံးပြုပြီး install, ယာဉ်မောင်း SFEP များအတွက် file ကို .inf အဆိုပါဖြည်ချပြီးဖိုင်တပ်ဆင်ခနှင့်အတူ folder ကိုရှာပါ "* လူသိများ device ကို။ " ဒါကြောင့်သင့်ပါတယ်အဖြစ်အရာအားလုံးကိုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖိုင်တွဲထဲမှာ SNY5001 ကားမောင်းသူဖိုင်
ထည့်သွင်းချင်ကြဘူးသော installation files များ၏ကျန်အထုပ်မှအလားတူလမ်းအတွက်။ အကြှနျုပျတို့သညျလိုအပျကွောငျးကို "စင်ကြယ်သော installer ကို" (ထွက်လှည့်သော folder ထဲမှာဆိုလိုသည်မှာအခြား exe ဖိုင်) ၏ရလဒ်အဖြစ်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။ ဒါဟာ Sony က Notebook အသုံးအဆောင်များကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းရုံသုံးခုကသီးခြားအစီအစဉ်များပါဝင်သည်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ အားလုံးသုံးဖိုင်တွဲကိုဖြည်၌ဖြစ်လိမ့်မည်, သူတို့ကသီးခြားစီ install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် Windows7ကိုရန် compatibility mode ကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ Windows 8 Pro နဲ့ Windows7လုပ်ငန်းခွင်ရောင်ခြည်နဲ့ volume ခလုတ်များကို, ပါဝါစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဘက်ထရီတာဝန်ရှိသည် ISBMgr.exe utility ကိုများနှင့်အခြားအရာအားလုံးအဘို့ - ထိုသို့ငါသည်နှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ Sony က VPCEH ပေါ်မှာရှိသမျှဒရိုင်ဘာကို install နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Vaio လျင်မြန်စွာ Web ကို Access ကို (Windows 8) နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီအဘို့ပြုအတိအကျဘာကိုသတိရနှင့်ယခုပျင်းရိခြင်းပြန်လုပ်ကြပါဘူး။
နောက်ထပ်အချက်: ကိုလည်းသင်ကသင်၏ Vaio မော်ဒယ် torrent tracker rutracker.org များအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကို၏လမ်းကိုရှာဖွေကြိုးစားနိုင်ပါ။ သူတို့ကတစ်ဦးလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုသငျသညျသူမ၏ရှာတွေ့နိုင်မည်အကြောင်း, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။
က IPS matrix သို့မဟုတ် TN - သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့? ထိုအကိုလည်း VA သို့အကြောင်းကိုနှင့်အခြား
မော်နီတာမှာ USB Type-C နှင့် Thunderbolt မတ်လ 2019
အဘယ်အရာကိုကို Windows 10, 8 နဲ့ Windows7မှာဖိုင်ကို hiberfil.sys ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
MLC, TLC သို့မဟုတ် QLC - SSD ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ? (အမျှကောင်းစွာအဖြစ် V-Nande, 3D Nande နှင့် SLC)